Safiirka Ingiriiska Ayaa Beeniyay Warbixinta Ra'iisul Wasaaraha - Axadle » Axadle Wararka Maanta
Safiirka Ingiriiska ayaa beeniyay warbixinta Ra’iisul Wasaaraha – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster ayaa iska fogeysay warbixinnada ay faafisay dowladda ku meel gaarka ah kulan ay la qaadatay ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, Mahdi Guuleed.
Afayeenka dowlada Macalimu Ibrahim ayaa ku sheegay bayaan ay ku daabaceen Foster iyo Kate Mahdi Guuleed in a looga hadlayo xoojinta iskaashiga labada dhinac, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga.
Daqiiqado yar kadib, safiirka ingiriiska ayaa ka falceliyey hadalkaas oo u muuqday mid lagu marin habaabinayo ujeedka dhabta ah ee kulanka maanta dhexmaray Mahdi Guuleed iyo Kate Foster.
Kate Foster ayaa sheegtay in ay kala hadashay Mahdi Guuleed mowqifka Britain ee ku aadan go’aanka golaha wakiiladu ku kordhiyeen waqtiga xafiiska madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo maamulada kale.
“Waxaan maanta kulan miro dhal ah la yeelanay Mahdi Guuleed, oo aan ka wada hadalnay xaalada siyaasadeed ee haatan taagan. Waxaan u xaqiijiyey in dowladda Ingiriiska aysan taageeri doonin muddo kordhinta Farmaajo, ayay tiri Kate Foster iyada oo ka jawaabeysa qoraal ay soo qortay afhayenka dowladda ilaaliyaha ah.
Waxay sidoo kale sheegtay in kulankii ay la qaadatay Mahdi Guuleed, Kate Foster ay carabka ku adkeysay muhiimada ay leedahay in si deg deg ah loogu laabto “nidaamka doorashooyinka ee la isku raacsan yahay” iyo in hogaamiyaasha ay ku laabtaan wada hadalka. Guuldaraystay
Kulan wax ku ool ah oo lala yeesho @KhadarGulaid oo ay ka wada hadlaan xaalada siyaasadeed ee haatan taagan. Xaqiijiyay in UK ?? aysan taageerin waqti kordhinta. Waxaan carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay soo-noqoshada deg-degga ah ee qaabka cawska ee la isku raacsan yahay. https://t.co/mloMdoMdOf
– Kate Foster (@KFosterFCDO) Abriil 18, 2021
Ciyaartan ayaa qeyb ka ah cadaadisyo isdaba joog ah oo caalami ah oo saarnaa dowladda muddo kadib, maadaama Baarlamaanka uu qaatay qaraar kordhinta xukunka labada sano ah ee ay ku xukuntay dowladda.
Dowladda ayaa shaqada ka tagtay maalmo yar kadib, xileedkeedu waxay qaadatay fikirka xagjirnimada madhan ee kulamada dhabta ah ee lala yeelanayo wadamada qaata iyo bulshada caalamka, kadib markii cadaadis lagu saaray go’aankii looga reebay baarlamaanka soo laabanaya, waxayna ugu hanjabtay haweeneydeeda weyn inay la kulmi doonto cawaaqibka taas. ficil.